Posted on 5 July 2019 12 August 2019 by Bayede-News
UVaughan wazuza imiklomelo emikhulu emculweni. Nge- albhamu yakhe esihloko sithi, “Sarah Vaughan with Clifford Brown” ihambisana nesingili esihloko sithi, “If you could see me now” yangeniswa ku “Grammy Hall of Fame.”
Ngowe-1985 uVaughan wazuza inkanyezi ku “Hollywood Walk of Fame” okuwuphawu lokuhlonipheka okukhulu endimeni yezomculo. Ngonyaka we-1988 uVaughan wangeniswa ku-“American Jazz Hall of Fame.” Ngowe- 1978 iBerklee College of Music yamhlonipha ngeziqu zobudokotela (Honorary Doctorate of Music).
ISan Fransisco and Berkerly eCalifornia yaguqula usuku lwama-27 kuNdasa lwaba yiSarah Lois Vaughan. Miningi eminye imiklomelo eyazuzwa nguSarah Vaughan empilweni yakhe yezomculo.
Baningi abaculi abadumile abancoma igalelo likaVaughan empumelelweni yabo kwezomculo. Kubona kukhona laba abalandelayo: u-Anita Baker; uPhoebe Snow; uSade noRickie Lee Jones.
Abaculi oCarmen McRae noDianne Reeves baqopha ama-albhamu behlonipha uVaughan emva kokudlula kwakhe emhlabeni. Enye yayisihloko sithi, “Sarah: Dedicated to You” (1991) enye ithi, “The Calling: Celebrating Sarah Vaughan” (2001).
Ezinye izingoma uSarah Vaughan adume ngazo kujazz yilezo ezifana ne “Ain’t misbehaving”, “Stormy weather”, It might as well be spring” nezinye.
USarah Lois Vaughan wazalwa zingama-27 kuNdasa we-1924 eNewark, New Jersey e-United States of America. Wadlula emhlabeni zi-3 kuMbasa we-1990 eHidden Hills, eCalifornia e-United States of America.
Wayeneminyaka engama-66 edlula emhlabeni kanti ubalwa nabesifazane abaphambili abangama-75 abaletha ukuhlonipheka kwaboHlanga e-United States of America (USA).